“Cristiano Ronaldo wuxuu doonayaa inuu ka tago Juventus” – Massimiliano Allegri – Gool FM
“Cristiano Ronaldo wuxuu doonayaa inuu ka tago Juventus” – Massimiliano Allegri
(Turin) 27 Agoosto 2021. Tababaraha Juventus Massimiliano Allegri ayaa xaqiijiyay in Cristiano Ronaldo uu doonayo inuu ka tago kooxda Bianconeri xagaagan.
Qandaraaska Ronaldo ee Juventus ayaa dhacaya xagaaga soo aadan, laakiin ciyaaryahanka ayaa ku adkeysanaya inuu ka tago haatan, dhowr warbixino ayaa dhawaan lagu sheegay, inuu ku dhow yahay inuu u saxiixo kooxda Manchester City.
Haddaba Tababaraha kooxda Juventus ee Massimiliano Allegri oo ka soo muuqday shir jaraa’id ayaa wuxuu yiri:
“Ronaldo wuxuu ii sheegay shalay inuusan doonayn inuu sii joogo oo u ciyaaro Juventus, sababtaas darteed uma yeeri doonno kulanka berri, aan ka hadalno ciyaarta Empoli.”
“Miyeey sagootinta Ronaldo xoojineysaa awoodda ciyaartoyda? Qof walba waxaa saran mas’uuliyad, waa wax iska caadi ah in maqnaanshiyaha Cristiano ay mas’uuliyad iska saari doonaan, halkaan waxaa jooga dhallinyaro badan waxaana u baahannahay inaan horumarinno.”
Intaas kaddib Massimiliano Allegri ayaa wax laga weydiiyay haddii uu ka xumaaday go’aanka Cristiano Ronaldo, wuxuuna yiri:
“Maya, wuxuu doortay masiirkiisa, Platini, Del Piero, Zidane iyo Buffon ayaa ka tagay Juventus, waa geesiyaal waaweyn, laakiin kani waa sharciga nolosha, Juventus ayaana weli ah tan ugu muhiimsan.”
“Ronaldo wuxuu halkaan joogay 3 sano kahor, wuxuuna qaatay doorkiisa, hadda wey dhamaatay oo nolosha way sii soconeysaa, Cristiano waa geesi weyn waxaana u rajaynayaa nasiib wacan meel kasta oo uu tago, wax weyn ayuu soo kordhiyay waana uga mahadcelinayaa wixii uu ku sameeyay Juventus.”
DEG DEG: Kooxda Manchester United oo ku dhawaaqday inay la wareegtay Cristiano Ronaldo